Kedu ihe bụ na olee otu ụlọ ọrụ ikuku ọkụ si arụ ọrụ? | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | Ike ikuku, Ike imeghari ohuru
Ike geothermal bụ ụdị ume ọhụrụ nwere ike ịnwe okpomọkụ sitere na okpuru ala ụwa iji kpoo ụlọ ma nweta mmiri ọkụ n'ụzọ dị mma obibi. Ọ bụ otu n'ime isi mmalite dị omimi, ma ihe ndị ọ rụpụtara dị nnọọ ịrịba ama.
Ike a Ekwesiri imepụta ya na osisi geothermal, mana gini bu osisi geothermal na olee otu o si aru oru?
1 Geothermal ike osisi
2 Geothermal ike ume
3 Kedu otu ụlọ ọrụ ikuku si arụ ọrụ?
3.1 Geothermal ubi
3.2 Usoro ọgbọ
4 Pesdị osisi ike nke geothermal
4.1 Akọrọ uzuoku osisi
4.2 Flash Steam Osisi
4.3 Ọnụọgụ abụọ nke etiti
Geothermal ike osisi
Powerlọ ọrụ ike dị na mbara igwe bụ ụlọ ọrụ ebe a na-ewepụta okpomọkụ site na Earthwa iji mepụta ume ọhụrụ. Carbon dioxide anwuru n’ikuku site na ọgbọ nke ụdị ike a bụ ihe dịka 45 g na nkezi. Nke a ihe na-erughị 5% nke ihe ọkụkụ kwekọrọ na mmanụ ọkụ na-ere ọkụ ọkụ, n'ihi ya enwere ike ịtụle ike dị ọcha.
Ndị kacha nwee ike ịkọ ikuku n'ụwa niile bụ United States, Philippines na Indonesia. Ekwesiri iburu n'uche na ike nke ikuku ozo, obu ezie na enwere ike imeghari ohuru, bu oke ike. Ọ nwere oke, ọ bụghị n'ihi na ọkụ nke iswa ga-agwụ ike (ebe dị anya na ya), kama ọ nwere ike wepụta ya n'ụzọ nwere ike n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa ebe ọrụ ikuku nke ụwa dị ike karị. Ọ bụ banyere ndị "na-ekpo ọkụ tụrụ" ebe enwere ike iwepụtakwu ume kwa mpaghara.
Ebe ọ bụ na ihe ọmụma banyere ike ikuku dị oke elu, ụlọ ọrụ Geothermal Energy na-eme atụmatụ na a na-ejide ya naanị ugbu a 6,5% nke ike ụwa nwere ike a.
Geothermal ike ume
Ebe ọ bụ na eriri ụwa na-arụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi, iji nweta ume nke ikuku ụwa, a ga-adanye ụwa site na pipụ, magma ma ọ bụ mmiri. Nke a na-enye ohere ịpụpụ nke ime na ijide ya site na ụlọ ọrụ ike nke geothermal.
Nweta ọkụ eletrik chọrọ nnukwu okpomọkụ nke a nwere ike ịbịa naanị n’ime ime ime ụwa. Ghara ida okpomọkụ n'oge njem na osisi, magmatic conduits, mmiri iyi na-ekpo ọkụ, hydrothermal mgbasa, olulu mmiri ma ọ bụ a Nchikota ha niile ga-wuru.
Ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe dị site na ụdị ike a ọ na-abawanye site na omimi nke a gbapuru ya na nso nso nke efere ndị ahụ. N'ebe ndị a ọrụ geothermal ka ukwuu, ya mere enwere ọkụ bara uru karị.
Kedu otu ụlọ ọrụ ikuku si arụ ọrụ?
Ọrụ nke ụlọ ọrụ ike nke ikuku na-adabere na ọrụ dị mgbagwoju anya nke na-arụ ọrụ usoro ihe-ubi. Nke ahụ bụ, a na-ewepụta ume site na ime ụwa ma buru ya gaa na osisi ebe ọkụ eletrik na-eme.
Thelọ ala dị na mbara ala ebe ị na-arụ ọrụ kwekọrọ na mpaghara ala ya na gradient jerferik dị elu karịa nke nkịtị. Nke ahụ bụ, mmụba ka ukwuu na ọnọdụ okpomọkụ na omimi. Mpaghara a nwere gradient dị elu karị na-abụkarị n'ihi ịdị adị nke aquifer nke ejiri mmiri ọkụ jupụta na nke a na-echekwa ma na-ejedebe site na oyi akwa na-adịghị egbochi nke na-echekwa okpomoku na nrụgide niile. A maara nke a dị ka olulu mmiri geothermal ma ọ bụ site ebe a ka a na-amịpụta ọkụ iji mepụta ọkụ eletrik.
Igwe olulu mmiri na-ekpo ọkụ nke jikọtara ya na ụlọ ọrụ ike dị na mbara ala ndị a. A na-amịpụta uzuoku site na netwọk nke ọkpọkọ ma na-eduzi ya na osisi ebe ike oku nke uzuoku a gbanwere n'ime ike igwe ma mechaa ghọọ ike eletrik.
Usoro nke ọgbọ na-amalite site na mmịpụta nke uzuoku na ngwakọta mmiri site na mmiri nke geothermal. Ozugbo a kụrụ ya gaa osisi ahụ, a na-ekewa uzuoku site na mmiri geothermal site na iji akụrụngwa akpọ cyclonic separator. Mgbe a na-amịpụta uzuoku, a na-eweghachi mmiri ahụ n'elu mmiri ahụ ọzọ ka ọ kpụgharịa ya (yabụ ọ bụ isi iyi ọhụrụ).
A na-eduzi uzuoku a na-amịpụta na osisi ma rụọ ọrụ tobaim nke onye rotor na-agbagharị na ihe dị ka 3 mgbanwe kwa nkeji, nke na - arụ ọrụ na generator, ebe esemokwu na mpaghara electromagnetic na-agbanwe ike igwe na ike eletrik. 13800 volts na-apụta site na generator nke mgbe a kpọfere ya na ndị na-agbanwe ọkụ, a na-atụgharị ha na 115000 volts. A na-ewebata ike a na mpaghara ọkụ dị elu iji ziga ya na ndị ọzọ wee si n'ụlọ ndị ọzọ, ụlọ ọrụ, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ.
A na-eme ka uzuoku ahụ dị na mmiri wee tinye ya n'ime ala mgbe ọ gbanwere turbine. Usoro a na - eme ka mmiri kpoo ọkụ na mmiri nke geothermal ma mee ka ọ bụrụ mmeghari ume ike, ebe ọ bụ na mgbe ọ ga - emegharị ya, ọ ga - agbanye ọkụ wee gbanwee turbine ọzọ. Maka ihe a niile, enwere ike ikwu na ike geothermal ọ bụ ihe dị ọcha, cyclical, ume ọhụrụ na ume na-adigide,, ebe ọ bụ na ntinye na-agbanyeghachi akụ nke eji eme ume. Ọ bụrụ na agbanyeghị mmiri dị iche iche na uzuoku a gbanwere n'ime mmiri ahụ, a gaghị ewere ya dị ka ume ọhụrụ, ebe ọ bụ na, ozugbo akụnụba gwụsịrị, enweghị ike ịmịpụ uzuoku ọzọ.
Pesdị osisi ike nke geothermal
E nwere ụdị ụlọ ọrụ ike atọ dị na mbara ala.
Akọrọ uzuoku osisi
Ogwe ndị a nwere ọdịdị dị mfe na nke ochie. Ha bụ ndị na-eji uzuoku ozugbo na okpomọkụ nke ihe dị ka ogo 150 ma ọ bụ karịa ịkwọ ụgbọala tobaim ma mepụta ọkụ eletrik.
Flash Steam Osisi
Osisi ndị a na-arụ ọrụ site n'ịwelite mmiri dị elu site na olulu mmiri ma webata ya na tankị dị ala. Mgbe a wedatara nrụgide ahụ, akụkụ nke mmiri ahụ na-agbaze ma na-ekewapụ na mmiri iji na-ebu turbine. Dị ka n'oge ndị ọzọ, a na-eweghachi mmiri mmiri na mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri.
Ọnụọgụ abụọ nke etiti
Ndị a bụ ihe kachasị ọhụrụ ma nwee ike ịrụ ọrụ na okpomọkụ mmiri naanị ogo 57. Mmiri ahụ na-ekpo oke oke ọkụ ma ọ gafere n'akụkụ mmiri ọzọ nwere ebe esi sie ike karịa mmiri. N'ụzọ dị otú a, mgbe ọ na-abanye na mmiri, ọbụlagodi na okpomọkụ nke naanị ogo 57, ọ na-agbapụ ma nwee ike iji mee ka ndị turbines.
Site na ozi a, n’ezie obi abụọ adịghị banyere ịrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ike ikuku ọkụ.
Kedu ka igwe kpo oku si arụ ọrụ? Anyị na-agwa gị:
Geothermal kpo oku
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Kedu ihe bụ na olee otu ụlọ ọrụ ikuku ọkụ si arụ ọrụ?
Gba nzọ na coal na-emebi ikuku nke Vietnam